Ukubulawa kweinjini yokukhangela: Icandelo elitsha
Oh Uh… uGoogle uQalisa ukuShishina ngeLwandle
NgoMgqibelo, nge-19 kaFebruwari ngo-2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ukubulawa kweinjini yokukhangela. Ngaba ukhe weva ngayo? Uza ku.
Kule veki, i-SEO ihlabathi bekunjalo yajika ngasentla phantsi xa uGoogle ethathe isigqibo sokulahla i-JC Penney kwisalathiso ngenxa ye-spammy, i-backlinks enegama eliphambili elifunyenwe kwiindawo ezingezizo ezazo zokunyusa isikhundla.
Ngelixa ishishini liphela lisothukile, uninzi lwethu ngaphakathi kwishishini luyazi ukuba le yinto eqhelekileyo. Inyani yile yokuba le mpazamo ishiyekileyo kwiphepha leGoogle kwi-algorithm eshiye umnyango mkhulu kakhulu, kangangokuba phantse ayinakwenzeka into yokuba inkampani yakho ye-SEO ingayisebenzisi. Abo bakushishino bababiza ngokuba bazizidenge, amavila kunye nokunganyaniseki. Ndiza kubheja ukuba uninzi lwabagxeki abasebenzisa i-SEO banamagama aphambili atyebileyo e-backlink kwenye indawo kwenye indawo eyanceda ukuqhuba isikhundla sabo.
Ukuqhagamshela ngasemva yi ishishini elikhulu. Iinkampani zinokuchitha amakhulu amawaka eedola kwimibutho ebuyela umva kunye nokwenza izigidi zeedola kwintengiso. Gcina ukhumbula ukuba nokuba kukuziphatha kakubi kangakanani na ukukopela ngolu hlobo, akukho semthethweni. Kukho konke ukunyaniseka, andinakugxeka iinkampani ngokuhlawula i-backlinks.
Ngoku ndisebenza nomthengi omnye obukele njengoko ukhuphiswano lwabo ludibanisa amawaka e-spammy backlinks veki nganye. Babetha umthengi wam ngamawaka emigaqo kwaye benza imali yabo, ngokungaqhelekanga, ngaphandle kweNtengiso zikaGoogle. Ukongeza isithuko ekonzakaleni, umsunguli wabo ovuthayo uhlala emanga u-Google kwaye ethatha malunga nokunganyaniseki kwishishini le-SEO-ngalo lonke elixesha uthenga ii-backlinks.
Ndithini kumthengi wam? Ndiyabacebisa ukuba banikele ngezixhobo ezininzi kunye nexesha elininzi lokubandakanya abo bafuna ukubakho kwiiwebhsayithi zentlalo. Kuyabiza, kudla ixesha, kwaye ayiphantse ibe nembuyekezo ethi ithenge nje i-backlinks. Yipilisi enzima ukuyiginya xa abantu beshishini eliqhagamshela emva bephuma kwimithi yokubanika iinkonzo ngeqhezu leendleko zokubonisana kwam.
Inyani yile yokuba ayisiyongxaki yomzi mveliso we-SEO, yingxaki kaGoogle. Ngokulinganisa inqanaba kakhulu kwi-backlinks, uGoogle uzityhefu ngokwazisa ishishini leebhiliyoni zeedola apho iingcali zinokubadlala ngokulula. Impendulo kaGoogle isenokuba mbi nangakumbi. Ngokulahla i-JC Penney kwisalathiso sokunqanda umnqwazi omnyama, uGoogle ubangele ishishini elibi kakhulu, Ukubulawa kweinjini yokukhangela shishini.
Olu lushishino oluza kuchuma ukuba uGoogle uyayithatha le ndlela kunye neenkampani ezininzi nangakumbi kwixa elizayo. Umzi mveliso wokuqhagamshela ngasemva uza kuqhubeka nokukhula- kodwa ngeli xesha ayizukubuyela umva kwindawo yakho, iya kuba kukushiya umkhondo we-spammy, i-backlinks enegama elingundoqo kwigama lakho okhuphisana nalo. Abacebisi be-SEO baya kusebenza nzima ukuba bangashiyi umzila onokuwuthatha kuGoogle xa bebeka abathengi babo kwinqanaba, kodwa banokuqala ukushiya umzila ocacileyo okhuphisana nawo.
Ngoku abacebisi beminqwazi emnyama ye-SEO banesinye isixhobo abanokusisebenzisa. Ngelixa besebenzela ukwandisa umgangatho wabathengi babo, banokulandela ukutshabalalisa inqanaba lokhuphiswano. Oku akulunganga kumzi mveliso.
QAPHELA: I-SearchDex, inkampani ye-SEO ejolise kuphando kwaye emva koko igxothwe ngu-JC Penney ibhengeze oku kulandelayo:
I-SearchDex ayikhange ithathe inxaxheba, okanye ixhase izikimu zonxibelelwano ezichazwe kwinqaku leNew York Times. Inkampani yethu yakhelwe kwimigangatho ephezulu yokuziphatha kwaye akukho ndawo sikhe sasebenzisa ukusetyenziswa kwezikim zonxibelelwano ezingalunganga okanye ezinye iindlela zobuchule kwiinkqubo zabathengi bethu. Amaqhinga e-SEO aqeshwe yi-SearchDex kubo bonke abaxhasi bethu, bexesha elidlulileyo nelangoku, baye bahambelana nezikhokelo zikaGoogle zeWebmaster. Ngenxa yebali le-NYTimes, i-SearchDex iqinisekisa ukuba zonke izicwangciso ezisetyenziselwa abathengi bethu ziyaqhubeka ukuthobela Izikhokelo zeWebmaster zikaGoogle. Sikwenza uphando olusesikweni ukuze sizame ukufumanisa umthombo kunye nenkuthazo yamakhonkco akhankanyiweyo kwinqaku. -UDave Chaplin, CEO
tags: into engathandekiyoUlwandleukubulawa kweinjini yokukhangelaSEOUmzi mveliso we-seo
Feb 19, 2011 ngo-9: 45 PM
Ngaba ungachaza ukuba zeziphi kanye ezinye iisayithi ezenzileyo ngokwemigqaliselo yelaymans?
Ngaba uthi amawaka eziza adibene nesiza seJC Penney kwaye uJC Penney uhlawule eli lungelo ngeqela lesithathu?
Ngaba ayisiyiyo enye indlela yentengiso?
Feb 19, 2011 ngo-9: 51 PM
Ewe uchanekile. UJC Penney (esazi okanye engazi) uqeshe inkampani ye-SEO eyababeka kwinqanaba ngokusabalalisa amakhonkco amafutshane kakhulu-leyo sisicatshulwa ngaphakathi kwethegi ye-anchor yayihambelana ngokuchanekileyo namagama aphambili anokutsala ukugcwala kwiphepha.
Feb 19, 2011 ngo-10: 38 PM
Enkosi ngengcaciso. Ndivele ndaya kwindawo yeJC Penney. Okwangoku banenqanaba lephepha le-Alexa elingu- # 695- ayisiyiyo inqanaba elibi ucinga ukuba kukho izigidi zeendawo ze-intanethi kwihlabathi lonke elwela amehlo akho. Mna ngokobuqu andiwuboni umba wokusebenzisa i-SEO ukubuyela umva kwiindawo njengoko uchazile.
Feb 19, 2011 ngo-11: 38 PM
Sonke kufuneka siqale ukubhekisa kwinto ezayo.
Ngokubhekisele kwelo nqaku… uGoogle khange amgqogqe uJC Penny. Entsha
York Times yenze. UGoogle akenzanga nto de umatshini wokushicilela wayifumana.
Umahluko ziibhloko zePR ezixabisekileyo eziphezulu kunye nomzi mveliso
isalathiso kuthelekiswa namawaka amakhonkco angasebenziyo.
Into ekufuneka sikhathazekile ngayo kukuvela kwe-SEO elandelayo.
UGoogle uza kubhekisa kumxholo onokukhutshelwa ngaphambi kokuba kubhekiswe kuwo
amanqaku kunye neeblogi- kungekudala.
Feb 20, 2011 ngo-12: 32 AM
INew York Times yayibhenca, kodwa yayisesona Google esingcwaba uJC Penney xa sele sinobungqina. Njengoko nditsho eposini, sisiphakamiso esoyikisayo kuba akukho bungqina bunxibelelanisa i-backlinks ngqo kwi-JC Penney. Oko kuthetha ukuba ezinye iinkampani ze-SEO zinokuhambisa amaqhinga afanayo ukonakalisa igama kunye nenqanaba labo bakhuphisana nabo. Awucingi ukuba iiSears kunye nezinye iinkampani ezizifumeneyo nje kwisikhundla se # 1 sele zingazivuni izibonelelo?
Kutheni le nto uDavid Segal, New York Times, wakhetha uJC Penney? Mhlawumbi bekukhankanywa okhuphisana naye?
Feb 20, 2011 ngo-3: 59 PM
I-SEA njengokuba uyibiza njalo, ibikhe yahlala ixesha elide… ndiyayikhumbula ixoxwa kwinkomfa yesiqhelo ye-SEO ngo-2008 (hayi njengesicwangciso esiliqili, kodwa njengesixhobo sendlela yokudlala umdlalo).
Feb 20, 2011 ngo-5: 20 PM
Paul, bendihlala ndisiva amarhe kodwa oku kubonakala ngathi sisiganeko sokuqala apho uGoogle aqinisekisa amanyathelo athathiweyo. Unayo imizekelo?
radar yokungena emhlabeni
Feb 21, 2011 ngo-1: 52 PM
Obu buchule busemthethweni phantse kuzo zonke iindawo zehlabathi oku kuyenziwa ukukwazisa igama eliphambili kwiinjini zokukhangela, ikhonkco elingasemva elinombhalo wegama elibalulekileyo eliphuma kweminye imimandla yeyona ndlela isebenzayo yokwakha amakhonkco kunye nokwazisa iwebhusayithi yakho kodwa ngoku kuya kuhlala Isoyikiso kuye wonke umntu owenza i-SEO kwishishini lakhe iGoogle enokwenza naliphi na ixesha kwishishini labo.
Okt 15, 2011 ngexesha 10:54 AM
Kude kube nini ngaphambi kokuba sibone amatyala ngokuchasene nokhuphiswano lwendawo lubatyhola nge-SEA? Kwaye mangaphi amatyala esiya kuwabona ngaphambi kokuba umthetho upasiswe ukwaphula umthetho.
Jul 23, 2012 ngo-6: 56 PM
Ukongeza isithuko ekwenzakaleni, umsunguli wabo ovuthayo uhlala emanga u-Google kwaye ethatha ngokunganyaniseki kwishishini le-SEO-ngalo lonke elixesha uthenga ii-backlinks. ”
Ndicinga ndiyazi ukuba uthetha ngabani 😉